दशैंमा ठगीबाट बच्न को कोसँग सर्तक हुने ? - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
काठमाडौं । दशैं तिहार जस्ता नेपाली महान चाडपर्व हाम्रो घर आगनमै आउँन लाग्दा हामी सबैलाई घर जान हतार हुन्छ । तर यही हतारको वेला हामी व्यर्थ ठगिन पनि पुगिरहेका हुन्छौं । कतिलाई गाडीभाडा समेत अभाव भई घर जान नपाएका हुन्छौं । मेहिनतले कमाएको पैसा हामीले यो वेलामा कहाँ ,कसरी र कति गुमिराखेको छ भन्ने थाहा नहुँदा हाम्रो पैसा खेर गईरहेको हुन्छ । यसवेला घरमा लुगाकपडा ,खाद्यान्न,मोवाईल जस्ता सामान पनि खरिद गर्नुपर्ने चर्को आवश्यकता झेलिरहेका हुन्छौ । किन्नै पर्ने हाम्रो मर्का बुझेर हामीलाई ठग्न विभिन्न रणनिति बनाएका हुन्छ व्यापारीले । त्यस्तै यात्राका क्रममा होटेल व्यवसायी ,चोर जस्ता गिरोह पनि आफ्नै तरिकाले सक्रिय हुन्छन् । त्यसैले चाडपर्वमा हामी यी ठगहरुबाट सचेत हुनु जरुरी छ ।
जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यातायात क्षेत्रमा दशैका बेलामा वार्गेनिङ् गर्न पल्केका व्यवसायीले हामीले सोझै यो दिनको टिकट बुकिङ् गरिदिनु न वा आज मलाई यहाँको टिकट मिलाई दिनुपर्यो भनेर माग राख्दा, छैन भनेर जवाफ दिन्छन् । एकछिनपछि हाम्रो अनुहार हेर्छन् ,अलिपर गएर अलि थपि दिनु न त मिलाई दिउँला ,दशैंको वेला छ ,टिकट पाईदैन । हामीलाई यसले भनेको साँच्ची भनेको हो भन्या जस्तो लाग्न सक्छ । त्यस्तै यति दिने भए दिनुस् ,नत्र जान पाउनुहुन्न । भन्ने जस्ता यात्रुलाई झस्काउन बाध्य बनाउने कुरामा ठुलो ठगी हुन हुन सक्छ । दशैंको वेलामा आफन्त घुसाउने जस्ता प्रवृतिले पनि यात्रुलाई सास्ती परिरहेको हुन्छ । यस्तो वेलामा प्रहरीबाट सहयोग लिएर यात्रा गर्नु राम्रो हुन्छ ।
व्यवसायीले सधै दशैको मुखमा वागे्रनिङ गरेर सरकारलाई झुकाउन थालेपछि निजी स्कुलका बस,साझा,सुरक्षा निकायका बस,केन्द्रीय परिवहन अन्तर्गत सरकारी बस संचालनको तयारी सुरु भएको छ ।
विभागले यी विकल्प अनुसार काम अघि बढाइसकेको छ । यो वाहेक रुट इजाजत अनुसार टिकट नकाट्ने बसको इजाजतनै निलम्बनको समेत तयारी गरेको छ ।
हामीले दशैंको वेलामा घर नजिकको बजार जाँदा होस् या यात्राका क्रममा होस् ,होटेल छिर्ने गर्छौ । होटेल तथा रेष्टरेण्टमा पनि हामीले होस् नपुर्याउँदा स्वास्थ्यमै गडबडी आउने सम्भावना हुन्छ । चाडपर्वका वेला होटेल व्यवसायीले बासी सडेगलेका खानेकुराहरु मिसाएर दिने ,खानाकुराको मुल्य बढाउने जस्ता ठगी गर्ने चाल चालिरहेका हुन्छन् ।
होटेल व्यवसायीको सानो लापरबाहीले हाम्रो स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पुर्याउने हुँदा हामीले यो समयमा सकभर पकाएका खानेकुरा भन्दा पकाउन बाँकी खानेकुरा खाँदा राम्रो हुन्छ । सधै खाईरहेका खानेकुराको मुल्य कतिपर्छ हामीलाई प्राय थाहा नै हुने हुनाले त्यो खानेकुराको मुल्यवृद्घि भएको शंका लागेमा किन बढ्यो भनेर प्रश्न गरिहाल्नुपर्छ । यो कुरा प्रहरी या जिल्लाको अनुगमन समितिलाई उजुरी गर्ने गर्नुपर्छ ।
चोरी गर्ने समुह
चाड पर्व नजिकिँदै जाँदा सुरक्षा जोखिम पनि त्यति नै हुने गरेको विगतको उदाहरण छ । खास गरि दशैं तथा तिहार जस्ता ठूला चाडबाडमा चोरी लुटपाट तथा ठगीका घटना अत्याधिक मात्रामा हुने गर्दछ । प्रहरीले यस्ता चाडबाडमा हुने संभावित घटनालाई मध्यनजर गर्दै आफ्नो सुरक्षा सतर्कता अपनाए पनि अपराधिहरुले फरक फरक बाटो पहिल्याईरहेका हुन्छन् ।
दशैंमा राजधानीबाट बाहिरीने यात्रुको सुरक्षाको लागि प्रहरीको सुरक्षा चुनौतीपूर्ण छ । यात्राका समयमा हुने विभिन्न चोरी लुटपाट र अन्य घटनाहरु समेट हुनसक्छन् । त्यसका लागि प्रहरीको सुरक्षा र स्वयम् यात्रु समेत सचेत रहनुपर्छ ।
त्यस्तै उपत्यका बाहिर जाने र आउने बसपार्क क्षेत्रमा यात्रुहरुका लागि टिकट विक्रिमा ठगी हुने गरेको तथ्य भेटिएको छ । जसको लागि प्रहरीको निगरानी बलियो हुनु जरुरी छ ।
प्रहरीको मुल्याङ्कनमा राजधानीको कलंकी, नयाँ बसपार्क, पुरानो बस पार्क, गौशाला, कोटेश्वर लुटपाटको घटना हुनेक्षेत्र मानिन्छ । त्यसैगरी गल्ली, कुनाकन्दरामा तथा मानिसहरुको धेरै भिड हुने स्थान, आर्थिक कारोबार बढि हुने क्षेत्र बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु लगायत बजार क्षेत्र बढि संवेदनशिल मानिन्छ । त्यस्तै आफु बस्ने गाउँ र शहरमा पनि यस्ता गिरोह मौका छोपिरहेका हुन्छन् ।
विकल्प वा कसरी बच्ने ?
यात्रामा रहँदा महत्वपुर्ण चिजवस्तु आफ्नो नजर पर्ने ठाउँ वा आफुसँगै राख्ने गर्नुपर्छ । रुपैंया सकेसम्म बैंकमा राख्नुपर्छ र आफुलाई आवश्यक पर्ने जति मात्र बोकेर हिँड्नुपर्छ । महिला दिदीबहीनीहरुले सकेसम्म गहना लगाएर यात्रा गर्नु राम्रो हुँदैन । पुरुषहरुले पछाडी खल्तीमा लामो पर्स राख्ने गर्नुहुँदैन । रुपैंया अगाडी बन्द खल्तीमा राख्नु उपयुक्त हुन्छ । मोवाईल ,ल्यापटप ,ट्याबलेट पनि अगाडी खल्तीमा राख्ने झोला आफुसँगै राख्ने जस्ता उपाय अपनाउने । त्यस्तै बाहिर गल्ली चोकतिर एक्लै नहिड्ने । कोही कसैले आफुलाई पछ्याएको शंका लागेमा प्रहरीलाई फोन गर्ने । नचिनेको मान्छेले दिएको खानुकुरा या अन्य चिजवस्तु नखाने ,नसमात्ने जस्ता होसीयारी अपनाउनु पर्छ ।
अन्य ठगी गर्ने क्षेत्रहरु
नेपाली बजार महंगी,कालो बजारी,मिसावट,गुणस्तरहिन सामानको बिगबिगी जस्ता बेथितिले भरिएको कुरा सम्बन्धित निकायलाई अवगत भए पनि नियमित अनुगमन र दोषीलाई कारवाही नहुँदा आम उपभोक्ताहरु कालो बजारी तथा महंगीको चेपुवामा पर्न बाध्य छन् ।
तरकारी पसल ,किराना पसल ,हार्डवेयर पसल ,कपडा पसल ,सुनचाँदी पसल ,यातायात क्षेत्र , औषधि पसल ,डिपार्टमेन्टल स्टोर,होटल,मासु पसल, विभिन्न उद्योग ,वितरक ,संचार ,म्यानपावर कम्पनी,कन्सल्टेन्सी लगायतका क्षेत्रहरुमा अनियमितता तथा बेथिति रहेको विगतको अनुगमन र अनुभवले देखाएको छ ।
अनुगमन फितलो हुने,अनियमितता तथा कालो बजारी गरेको भेटिए पनि दोषीलाई कारवाही नहुने हुँदा कालोवजारी,महंगी तथा मिसावट गर्नेहरुको संख्या घट्नुको साटो दिनप्रतिदिन बढ्दो छ । मुख्य राजमार्गहरुका छेउछाउमा रहेका होटलहरुमा कम गुणस्तरको खाना उच्च मुल्य तिर्न यात्रुहरु बाध्य छन् भने सडक छेउमै रहेका किराना पसल तथा कोल्डस्टोरहरुको ज्यादती त भनि साध्य छैन ।
यात्रा गर्दा पानी,बिस्कुट,चाउचाउ,हल्का पेय पदार्थ जस्ता खानेकुराहरु अनिवार्य भएको हुँदा यात्रुहरु चुपचाप चर्को मूल्य तिर्न बाध्य छन् । उपभोक्ता ठगिने अर्को क्षेत्र कपडा पसल तथा फेन्सी पसल पनि हो । केही समय अगाडी काठमान्डौका केही महत्वपूर्ण सपिंग मलहरुमा सरकारी निकायले अनुगमन गर्दा रु.९८ मा खरिद गरेको टिसर्ट रु १००० मा बिक्रि गरेको भेटिएको थियो ।
थान तथा रेडिमेड कपडाहरुको अधिकतम बिक्रि मूल्य लेखिएको नहुने र उपभोक्ताले कपडाको गुणस्तर पहिचान गर्न नसक्ने हुनाले व्यापारीले ग्राहक अनुसार आफूखुसी मूल्य तोक्ने गरेको पाइन्छ । त्यस्तै ग्यास,डिजेल,पेट्रोल,मट्टीतेल जस्ता पेट्रोलियम पदार्थमा पनि नियमित कालो बजारी र अनियमितता भएको पाइन्छ । कहिले कृतिम अभाव सिर्जना गरी उपभोक्ताबाट बढी मुल्य असुल गरिन्छ भने कतिपय पेट्रोल पम्पहरुले मिसावटका साथै कम परिमाण पेट्रोलियम पदार्थ दिएर उपभोक्ता ठगिरहेका हुन्छन् ।
मिठाई पसलमा मिसावट तथा वासी सडेगलेका खाद्यवस्तुको बिक्रि ,मासु पसलमा खसीको मासु भनेर बोका वा बाख्राको मासु बिक्रि गर्ने,यातायातमा सिण्डिकेट,यात्रुबाट बढी भाडा असुल्ने,चानचुन पैसा फिर्ता नदिने , शिक्षामा चर्को शुल्क असुल्ने,अस्पतालमा लापरबाही,कार्यालयमा भ्रस्टाचार,इन्धनमा मिसावट,मासुमा मिसावट,तरकारीमा विषादी ,उद्योगमा कम तौल तथा कम गुणस्तरको सामान उत्पादन, सुनचाँदी पसलमा पित्तल मिसावट तथा कम तौल,व्यापारीले व्याट बिल नकाट्ने/नदिने ,मुल्य तथा उत्पादन मिति नराख्ने,म्याद गुज्रिएका सामानको बिक्रि गर्ने जस्ता नेपाली वजारका मुख्य बेथितिहरु हुन् ।
वास्तवमा उपभोक्ता नठगिएने कुनै क्षेत्र नै छैन भने पनि हुन्छ । सबै क्षेत्रको नियमन गर्ने छुट्टाछुट्टै सरकारी निकाय भए पनि झारो टार्ने र चर्चा आउने उद्देश्यले मात्र काम गर्ने प्रवृतिको अन्त्य हुनु पर्छ । नयाँ सरकार आउँदा सचिवहरुलाई बोलाएर बजार अनुगमन निर्देशन दिने ,केहीदिन काम गरे जस्तो गर्ने र बिस्तारै सेलाउदै जाने प्रवृतिले कालो बजारी तथा महंगीले प्रशय पाएको देखिन्छ ।
स्थायी सरकार मानिने कर्मचारी आफ्नो काम नियमित गर्ने तथा सरकार फेरवदललाई महत्व नदिई विद्यमान कानुन अनुसार दोषीलाई कारवाही गर्दै जाने र अनुगमनलाई अभियानकै रुपमा निरन्तर गर्ने हो भने बजारमा हुने बेथिति आफै क्षीण भएर जान्छ ।
कालोबजारी भएको थाहा हुँदा हुदै पनि उपभोक्ता चुप लागेर बस्नु वा उजुरी गर्ने निकाय तत्काल नभेटिनु वा उजुरी गरे पनि कारवाही नहुने प्रवृतिले पनि कालो बजारी मौलाएको पाइन्छ । कतिपय ग्राहकहरुले आफुलाई अरु भन्दा अलि फरक देखाउन सामानको मूल्य नै नसोधी सरासर सामान किन्छन् र पसलेले भनेको रकम खुरुक्क तिरेर जान्छन् ।
त्यस्तै बजारमा कुनै सामानको अभाव हुने कसैले हल्ला फिँजाइदियो भने मानिसहरु पछि सामान नपाइएला वा अभाव होला भन्ने डरले आफुलाई आवस्यक नपर्ने सामान पनि बढी मात्रामा किन्न रुचाउँछन । यही मौकामा व्यापारीहरुले मूल्य बृदि गर्ने गर्दछन् ।
चाड पर्व नजिकिदै गर्दा बजारमा विशेषगरी चिनी,खाना पकाउने तेल जस्ता दैनिक उपभोग्य सामाग्री आभाव हुनुका साथै मूल्य पनि आकासिने गर्दछ । २–३ किलो चिनी र २–३ लिटर तेलले चाडपर्व उम्कने अवस्थामा पनि ८–१० किलो चिनी तथा ८–१० लिटर तेल किनेर भण्डारण गर्न चाहन्छन् नेपाली उपभोक्ताहरु । यस्तो प्रवृति देशैभरि लागुहुने भएकोले बजारमा सामानको उपलब्धता कम हुँदा यही मौकामा व्यापारीहरुले चौका हान्न पछि पर्दैनन् ।
कहिलेकाहीँ बजारमा प्याज,टमाटर ,काउली जस्ता तरकारीको मूल्य उच्च हुदाँहुदै पनि बजारमा त्यस्ता तरकारी खोसाखोस बिक्छन् । अर्थशास्त्रको नियम अनुसार कुनै बस्तुको मुल्यमा बृदि हुँदा मागमा कमि आउनु पर्ने हो । तर बजारमा त्यस्तो देखिदैन । यस्तो अवस्थामा उपभोक्ता पनि सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ ।
के प्याज र टमाटर विना हाम्रो भान्छा चल्दै न र ? महँगो भएको बेलामा ती चिजहरु नखाए के बिग्रन्छ ? यदि आम उपभोक्ताले त्यस्ता महंगिएको वस्तुको विकल्प खोजी दुई चार दिन नकिन्दिने हो भने अर्थशास्त्रको नियम लागु हुन सक्छ । अर्थात माग कम भएपछि त्यस्ता छिट्टै विग्रने वस्तुको मुल्य घट्नुको बिकल्प हुदैन । तसर्थ महंगी,कालोबजारी विरुद्ध आम उपभोक्ता आफै सचेत हुन जरुरी देखिन्छ ।
आफुले लिने सामानको उत्पादन मिति,तौल,मूल्य राम्रोसंग हेर्ने ,जहाँ पायो त्यही सामान नकिन्ने ,आफुले किन्ने सामानको मूल्य पहिल्यै सोध्ने र महंगो लागे नकिन्ने ,सामानको बिल लिने, आफुलाई चाहिने सामान आवस्यक मात्रा मात्र खरिद गर्ने ,पछि अभाव होला भनेर अनावस्यक मात्रामा सामान भण्डारण नगर्ने ,कृतिम अभाव प्रति सचेत हुने,वैकल्पिक उपाय खोजी समस्याको समाधान गर्न प्रयास गर्ने ,देखासिकी र समाजमा आडम्वर नदेखाउने ,स्वदेशी उत्पादनलाई बढी प्राथमिकता दिने ,कसैले कालो बजारी गर्दैछ भने सम्बन्धित निकायमा खबर गर्ने जस्ता कार्य उपभोक्ताहरुले गर्न सके पनि बजारको बेथिति केही हदसम्म भएपनि कम हुने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
कालो बजारी,महंगी तथा बेथितिको अन्त्यको लागि उपभोक्ता सचेतना सबैभन्दा ठुलो हतियार हो । सरकारले आम उपभोक्तालाई सचेतना मुलक कार्यक्रम संचालन गर्दै बजार अनुगमनलाई तिब्रता दिने र दोषीलाई कारवाही गर्ने हो भने नेपाली बजारमा सुशासन कायम हुने कुरामा आशा गर्न सकिन्छ ।